Umgubasi kanaphakade: "Ngandlel' ithile: ibali lethu sonke" | Uncwadi lwangoku
Ukucaphula nguKen Follett.
Umbundu kanaphakade yinoveli yembali yanamhlanje ebhalwe ngumbhali waseBritane ophumelele imbasa uKen Follett. Yapapashwa ngoSeptemba 2014 kwaye sisitonge sesithathu se I-Trilogy yenkulungwane, encediswa ngu Ukuwa kweengxilimbela (2010) kunye Ubusika behlabathi (2012). Ngesi sihlandlo, i-protagonists yinzala yabalinganiswa abaphambili bezihloko zangaphambili kwi-saga.
Kule trilogy, umbhali unikezela ngembali yeentsapho ezintlanu zezizwe ezahlukeneyo kunye nendlela ezichaphazeleka ngayo Ukutyhubela izizukulwana— yi iziganeko ezahlukeneyo zembali. Ngokuphathelele oku, uFollett ugxininisa esithi: “Eli libali likatatomkhulu nomakhulu nelakho, abazali bethu nobomi bethu. Ngandlela ithile libali lethu sonke ”.
1 Isishwankathelo soMbundo kaNaphakade
1.1 Ibali liyaqala
1.2 EMpuma Jamani
1.3 EUnited States
1.4 EUnited Kingdom
1.5 isoviet Union
1.6 Isiphelo sokwenyani
3 Malunga nombhali, uKen Follett
3.1 Umsebenzi wobugcisa
3.2 Umsebenzi woncwadi
3.3 Isebenza nguKen Follert
Isishwankathelo se Umbundu kanaphakade
Inoveli iqalisa ngowe-1961, kwiminyaka eli-16 emva kokuphela kweMfazwe Yehlabathi II. Sithetha ngexesha apho amandla amakhulu athathe inzuzo - phakathi kwabo, iRashiya, ilizwe elikhulu kwiSoviet Union. AmaRashiya abeka imfundiso yawo yobukomanisi kuwo wonke loo mmandla de afikelela eJamani, nto leyo eyabangela ukuba amaJamani aqalise ukulishiya ilizwe lawo.
Le nxalenye idlala iinkwenkwezi Rebeka, utitshala East German usapho Franck - umzukulwana Lady Maud kaThixo - ngubani ngenye imini wafumana isamani kwiStasi - amapolisa ayimfihlo ye-German Democratic Republic (GDR) -. Oku kwamenza wanomdla ngoko nangoko, kuba wayengazazi izizathu zalo myalelo. Nangona kunjalo, uye waya ngomhla ochaziweyo. Kanye indawo, wabuzwa ngokucokisekileyo.
Emva kokutolikwa okungendawo, uRebheka Wayefuna ukulishiya ikomkhulu leStasi ngoko nangoko, kodwa wabalekela kumyeni wakhe uHans. Ngelo xesha umfazi wafumanisa ukuba indoda yamqhatha kumtshato wonke. Yena wayelieutenant yeStasi kwaye wamtshata kuphela ukuba abe kuhlola intsapho yakhe.
Emva kokuva yonke into, URebheka wazama ukusaba kweso sixeko, akaba nako, ekubeni ukuhamba kwakhe kwangqamana nesigunyaziso esoyikekayo esivela kurhulumente weGDR. Baye bagqiba ekubeni bahlule "amaJamani amabini" ukuze ayeke ukubhabha rhoqo kweengcali ezivela kweli lizwe. Ukususela ngelo xesha kwaqaliswa ukwakhiwa koDonga lwaseBerlin oludume kakubi, yaye uRebecca wayevaleleke ngokuyinxenye yaye eyedwa, kunye namakhulu amawaka amaJamani kwindawo nganye.
Ngaloo maxesha, kwelinye icala lehlabathi wayekho UGeorge jakes Unyana kaGreg Peshkov-, umfana owayesebenza njengegqwetha kulawulo lukaMongameli uJohn F. Kennedy. Ngaphezu koko, kwaba njalo umlweli wamalungelo oluntu ye umAfrika waseMelika e-US Umzabalazo wakhe wamkhokelela ekubeni athathe inxaxheba kuqhanqalazo kumazantsi elizwe kwaye azimase umngcelele owawukhokelwa nguMartin Luther King ukuya eWashington.
UKen Follett ucaphula.
George yayisebenza ekudaleni umthetho wamalungelo alinganayo. Nangona kunjalo, loo nto yalahlekelwa yintsingiselo emva kokuba uKennedy ebulewe. Kwiminyaka kamva, waqalisa ukusebenza kunye noBobby Kennedy, nangona izicwangciso zakhe zawa kwakhona xa le ndoda yagwintwayo nayo.
Dave williams Uyi-protagonist yembali kulo mmandla waseYurophu. Ukusuka apho, wakwazi ukucamngca ngenkxalabo yamanye amazwekazi amabini. Umfana wayephupha ngokuba yimvumi aze aseke iqela lomculo werock nabahlobo bakhe. Akuba ephumelele, wasebenzisa ezo ngoma ukuze avakalise uluvo lwakhe ngokungabikho kwenkululeko nokungekho sikweni.
Enkosi kwimpumelelo yeqela, bahamba baya kwilizwekazi laseMelika. Ume apho uDave kunye nabalingane bakhe beqela wahlala eSan Francisco kwaye inxaxheba ngokukhutheleyo kwimvelaphi yentshukumo yeehippie -Ngoku ikhokelwa ngabancinci baseMelika abaqhankqalaza ukuphelisa iMfazwe yaseVietnam.
Imeko yezopolitiko eSoviet Union esiboniswa nguFollett ayilula kwaphela. Umbhali ubeka umfundi kanye emva kokufa kukaKhrushchev kunye nokuhlutha kukaBrezhnev amandla. IMfazwe Yomlomo yagquba yaza yasingela phantsi isiseko sesakhiwo ngelo xesha esasigqalwa njengesingenakonakala. Kwicala lakhe, eRashiya, uGorbachev wazama ukusindisa uqoqosho lwelizwe ngesicwangciso sePerestroika, kodwa umzamo wakhe wawulilize.
Ngaphantsi kwale panorama, abalinganiswa abaphambili beli candelo bayavela: amawele uDimka noTania. Yena, ilungu leqela eliselula ubukomanisi, inkwenkwezi ekhulayo yentshukumo; swena sisi, enye umlweli wemvukelo. Ngenxa yoku kukhankanyiwe ngasentla, uqhanqalazo lwanda-kunye namanyathelo amabi athatyathwe ngoorhulumente-olukhawulezise ukuwa kobukomanisi.
Emva kwalo lonke olu luhlu lweziganeko, ekugqibeleni, ngoNovemba 11, 1989, uDonga lwaseBerlin lwadilizwa.
Ibali lenzeka phakathi konyaka we-1961 kunye no-1989 —Kuphuhliso olupheleleyo lweMfazwe Yomlomo. Umlinganiswa ngamnye uhamba ngedabi elizimeleyo. Ihlabathi lifumana amaxesha anzima amagunya amakhulu alwela izilangazelelo zawo ngaphandle kokuthathela ingqalelo iziphumo zezenzo zabo.
Umbundu kanaphakade yinoveli ngo uhlobo lwembali eyintsomi. Iphuhlisa kulo lonke Amacandelo ali-10 athi ngokulandelelana ahlulwe ngokwezahluko kwaye oko kongeza ezinye Amaphepha ayi-1152. Umsebenzi ngu ibaliswa ngendlela elandelelanayo ngumbalisi wamabali owazi konke osebenzisa ulwimi olulula nolonwabisayo — iimpawu ezihlakulelwe nguFollett kumsebenzi wakhe omde nezithi zibambe umfundi ngokukhawuleza, nokuba zange amfunde umbhali ngaphambili.
Malunga nombhali, uKen Follett
UKenneth Martin Follett-uKen Follet-wazalwa ngoJuni 5, 1949 eCardiff, ikomkhulu laseWales. Abazali bakhe yayinguVeenie noMartin Follet. De wayeneminyaka eyi-10 wayehlala kwidolophu yakowabo, waza wafudukela eLondon. Vula Ngo-1967, waqala ukufunda ifilosofi kwiYunivesithi yaseLondon, uhlanga ukuba yaphela kwiminyaka emithathu kamva.
Ngo-1970, wathatha izifundo zobuntatheli iinyanga ezintathu, nto leyo eyakhokelela sebenza njengentatheli iminyaka emithathu kwi UMzantsi Wales Echo, eCardiff. Emva koko, wabuyela eLondon, apho wayesebenza khona Umgangatho wangokuhlwa. Ekupheleni kweminyaka yoo-70s wabubeka ecaleni ubuntatheli wangqiyama ekupapasheni, waza waba ngusekela mlawuli we-Everest Books.
Waqala ukubhala amabali njengento yokuzonwabisa, nangona kunjalo, ubomi bakhe batshintsha ngokupapashwa kwe Iliso lenaliti (1978), inoveli yakhe yokuqala. Ngombulelo kule ncwadi, wafumana ibhaso lika-Edgar, ukongeza ekuqapheliseni ukuqondwa kumazwe ngamazwe. Enye yeengoma zakhe zeza ngo-1989 kunye Iintsika zomhlaba, umsebenzi apho yahlala kwizikhundla zokuqala zokuthengisa eYurophu ngaphezu kweminyaka eyi-10.
Kuyo yonke imisebenzi yakhe upapashe iinoveli ezingama-22 kwiindidi zembali kunye nezokuthandabuza. Bavelele phakathi kwabo: Emlonyeni wenamba (1998) Inqwelomoya yokugqibela (2002) Ihlabathi elingenasiphelo (2007) kunye Inkulungwane yeTrilogy (2010). Kwiincwadi zakhe, ezisi-7 zilungiselelwe umabonwakude nakwi-cinema, ukongeza ekuwongweni amabhaso abalulekileyo, afana neBancarella Prize (1999) kunye neInternational Thriller Writers Awards (2010).
Isebenza nguKen Follert
ISiqithi seNkanyamba okanye Iliso leNaliti (1978)
Indoda yaseSt (1982)
Amaphiko okhozi (1983)
Intili yeengonyama (1986)
Iintsika zomhlaba (1989)
Ubusuku phezu kwamanzi (1991)
Ithamsanqa eliyingozi (1993)
Indawo ebizwa inkululeko (1995)
Iwele lesithathu (1997)
Emlonyeni wenamba (1998)
Umdlalo ophindwe kabini (2000)
Umngcipheko omkhulu (2001)
Inqwelomoya yokugqibela (2002)
Ihlabathi elingenasiphelo (2007)
Ukuwa kweengxilimbela (2010)
Ubusika behlabathi (2012)
Umbundu kanaphakade (2014)
Ikholam yomlilo (2017)
Ubumnyama nesifingo (2020)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Umbundu kanaphakade
Jacinta Cremades. Udliwano-ndlebe nombhali wokuBuyela eParis
Ngaba kuyimfuneko ukuba ne-4G kwi-eReader yakho?